အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ မျက်စိလေးတွေကျန်းမာနေအောင် ဘယ်လိုဂရုစိုက်ကြမလဲ? - Myanmarload
အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ မျက်စိလေးတွေကျန်းမာနေအောင် ဘယ်လိုဂရုစိုက်ကြမလဲ?
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နေ့ က 13:08 September 11, 2021
ခုလိုကာလမှာ ဖုန်း နဲ့ Laptop တွေအသုံးပြုတာများလာတဲ့အတွက် ကြောင့် သင်တို့ရဲ့မျက်စိလေးတွေဟာ အနားမယူရဘဲ အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်နေကြရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ကြာလာတဲ့အခါမှာ မျက်စိတွေဝေဝါးတာ၊အမြင်အာရုံမကြည်လင်လာတာတွေကို ခံစားလာကြရပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ မျက်စိလေးတွေ မဝေဝါးစေဖို့ ပြုလုပ်ပေးရမယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ပြပေးပါရစေ။
မျက်လုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့ Omega 3, Vitamin A,C,E အစရှိတဲ့ ဓာတ်သတ္တုတွေပါဝင်တဲ့ မုန်လာဥနီ၊ကြက်ဥ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ဆဲလ်မွန်ငါးနဲ့အသီးအနှံတွေကို စနစ်တကျစားသုံးပေးပါ။ဒီအာဟာရဓာတ်တွေဟာ မျက်စိအတွင်းတိမ်ဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချပေးတာကြောင့် သေချာစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။
၂။Screen Break ခဏခဏယူပေးပါ။
ဖုန်းတွေ ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်များလာတာနဲ့အမျှ မျက်စိကိုလည်းပိုမိုထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အလုပ်လုပ်နေရင်းဖြစ်စေ၊ဖုန်းသုံးနေရင်းဖြစ်စေ Screen ကို အသုံးပြုနေခြင်းမှ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက် ခဏခဏ အနားယူပေးပါ။ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ကိုမျက်စိမှုန်ခြင်း၊မျက်စိခြောက်ခြင်း၊လည်ပင်းနဲ့ပခုံးများညောင်းညာကိုက်ခဲခြင်းမှ သက်သာစေပါတယ်။Screen Break လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ မျက်တောင်ခတ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့။
မိုးလင်းလို့အိပ်ယာနိုးလာတဲ့ ဖုန်းတန်းကြည့်တတ်တဲ့အကျင့်အစား သစ်ပင်တွေ၊ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ စိမ်းစိမ်းစိုစိုတွေကို အရင်ဆုံးကြည့်တတ်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်ယူပါ။ဒါ့အပြင် အပေါ်ကလို Screen Break ယူတဲ့အချိန်မှာ TV ပြန်သွားကြည့်နေရင်လည်း ဒါဟာအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုအချိန်မှာလည်း စိမ်းစိမ်းစိုစိုတွေကိုဦးစားပေးကြည့်ပေးပါ။ဒါဟာသင့်မျက်စိကိုပိုပြီးကြည်လင်လာစေနိုင်ပါတယ်။
မိမိရဲ့မျက်လုံးဟာ အတော်လေးကို ဝေဝါးနေတယ်လို့ ခံစားလာရတာနဲ့ မျက်စိဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးလိုအပ်တဲ့ ဆေးကုသမှုကိုခံယူပါ။ဒါမှအချိန်တိုအတွင်း မျက်စိကို မထိခိုက်ပဲ ကျန်းမာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာပြီး ကြည်လင်ကျန်းမာတဲ့မျက်စိတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Page generated in 0.3292 seconds with5database query and6memcached query.